- San Francisco လည်ပတ်မည့်ကြာချိန်
- ( 14 Days / 13 Nights )
Day 01 အမေရိကန်နိုင်ငံ ၊ နယူးယောက်မြို့သို့ရောက်ရှိသည့်နေ့( နေ့လည်စာ / ညနေစာ )
အမေရိကန်စံတော်ချိန်နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီတွင် New York မြို့သို့ရောက်ပါမည်။ တွင်မိမိတို့ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ လေဆိပ်မှတဆက်တည်း New York Tour ကို စတင်လည်ပတ်ရာတွင် လေဘာတီကျွန်းကိုသဘောင်္စီြး့ပီး၊ နယူးယောက်မြို့ရှုခင်း ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးနောက်၊ တဆက်တည်း Time Square, Wall Street, Rockefeller Center. Empire State Building တို့ကိုလည်ပတ်၊ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကြပြီးနောက်၊ ညနေစာကို သုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက် တည်းခိုမည့်ကြယ်သုံးပွင့် အဆင့်ရှိသော ဟိုတယ်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ဟိုတယ်သို့ရောက်လျှင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ check in လုပ်ပေးပါမည်။ နယူးယောက်မြို့တွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Prasippany*** ( or ) Similar
Day 02 နယူးယောက်မြို့ ၊ ဖီလာဒဲဗီးယား - ဝါရှင်တန်ဒီစီ ( နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ )
နံနက်စာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ အစိုးရရုံးစိုက်ရာမြို့ဖြစ်သော၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ သို့ ကားဖြင့်ထွက်ခွာပါမည်။ ဖီလာဒဲဗီးယား တွင်ရပ်နားပြီး၊ လွတ်လပ်ရေးခန်းမ၊ လေဘာတီခေါင်းလောင်း နှင့် eSifhUnited State Mints တို့ကိုလေ့လာလည်ပတ်ပြီးနောက်၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီသို့ ဆက်လက် ထွက်ခွါပါမည်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီသို့ရောက်လျှင် ညနေစာ သုံးဆောင်ပြီး၊ ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက်အိပ်စက် အနားယူပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Chantilly Dulles or Similar
Day 03 : ဝါရှင်တန်ဒီစီ တွင်လည်ပတ်မှု ( နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ကိုစတင်လည်ပတ်ကြပါမည်။ လည်ပတ်လေ့လာမည့်နေရာများမှာ – Washington DC City Tour, Lincoln Memorial. Jefferson Memorial, Washington Monument, Capitol Hill, White House and Pentagon တို့ကိုလေ့လာလည်ပတ်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကာ အနားယူပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Chantilly Dulles or Similar
Day 04 : ဝါရှင်တန်ဒီစီ - MCO Airport - မီယာမီယဖလော်ရီဒါမြို့ (နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ မှအော်လန်ဒို (MCO) သို့လေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွါပါမည်။ အော်လန်ဒိုသို့ရောက်လျှင်၊ တဆက်တည်း မီယာမီသို့ထွက်ခွါပါမည်။ မီယာမီကို Free time leisure or Shopping tour အနေဖြင့်လည်ပတ်ပြီး၊ မီယာမီတွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Port of Miami - Downtown or Similar
Day 05 : မီယာမီယဖလော်ရီဒါပြည်နယ် ( နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏ စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ စိတ်လှုတ်ရှားဖွယ်ရာ အလှအပများဖြင့်ပြည့်နေသော မီယာမီကို City Tour အနေဖြင့်စတင်လည်ပတ်ပါမည်။ Miami beach ကိုကြည့်ရှုလည်ပတ်အနားယူပြီးနောက်၊ဆက်လက်ပြီး၊ Downtown Miami, the Coconut Grove, the Coral Gables, The Little Havana တို့ကိုပျော်ပျော်ပါးပါး လည်ပတ်လေ့လာပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ မီယာမီတွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Port of Miami - Downtown or Similar
Day 06 : မီယာမီ- အော်လန်ဒီုယဖလော်ရီဒါပြည်နယ်( နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှထွက်ခွါခွင့်လုပ်ကာ၊ အော်လန်ဒိုမြို့ကိုလည်ပတ်ပါမည်။ အော်လန်ဒိုမြို့ရှိထင်ရှားသော Tourist attraction site များဖြစ်သော၊ Lake Eola Fountain, The Mall at Millennia, Church Street Station တို့ကိုလည်ပတ်ပြီးနောက်၊ အချိန်ရပါက Premium Outlet Mall ဈေးဝယ်ရန်ပို့ ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပျော်ရွှင်စွာဈေးဝယ်ထွက်နိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက်တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ထွက်ခွါ၊ ဝင်ရောက်ခွင့်လုပ်ပြီး၊ ဟိုတယ်တွင်အနားယူပါမည်။ အော်လန်ဒိုမြို့တွင်ညအိပ်ပါမည်။
Hotel : Holiday Inn &Sultes Across from Universal Orlando or Similar
Day 07 : အော်လန်ဒီုယဖလော်ရီဒါပြည်နယ် – လော့စ်အိန်ဂျယ်လီ( နံနက် /နေ့လည်စာ / - )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လီသို့မထွက်ခွါမီဟိုတယ်တွင် လွတ်လပ်စွာနေနိုင်ပါသည်။ ( ၁၂းဝဝ ) အချိန်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုကာ၊ နေ့လည်စာကို သုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လီသို့ထွက်ခွါရန်၊ လေဆိပ်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ( ၁၇း၁၅ )အချိန်တွင်အော်လန်ဒိုလေဆိပ်မှထွက်ခွါကာ၊ ( ၁၉း၅၅ )အချိန်တွင်လောစ်အိန်ဂျယ်လီလေဆိပ်သို့ရောက်ပါမည်။ တဆက်တည်း တည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက် check in လုပ်ကာ ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Hotel : Crown Plaza LAX Airport or Similar
Day 08 : လော့စ်အိန်ဂျယ်လီမြို့ Hollywood – Universal Studio Full day Tour လည်ပတ်မှု ( နံနက် /နေ့လည် /ညစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရုပ်ရှင်စတူဒီယိုဖြစ်သော Universal Studio သို့သွား ရောက်လေ့လာပါမည်။ ရေအောက်ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပုံများကိုပြသထားသော Universal Studio Tour ကိုလေ့လာပြီး၊ ငါးမန်း ဖြူနံမည်ကျော်ွှနမာငညအေသမမှအစရှိသည်များကိုလေ့လာကြည့်ရှု့ကြပါမည်။ ၄င်းနောက် Chinese Theater, Kodak Theater, WarnerBrothers များသို့လည်ပတ်လေ့လာကြည့်ရှု့ပါမည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ပြန်၍အနားယူအိပ်စက်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Buena Park or Similar
Day 09 : လော့စ်အိန်ဂျယ်လီမြို့ - Anaheim, CADisney Land Tour ( နံနက်/နေ့လည်/ညစာ )
နံနက်စာကို ဟိုတယ်တွင်သုံးဆောင်ပါမည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုပြီး ကမ္ဘာ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာဟု တင်စားခေါ်ဝေါ်ရသည့် Disney Land သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ Los Angeles တွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Buena Park or Similar
Day 10 : Anaheim, CA – Barstow - လာစ်ဗေးဂတ်( နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ)
နံနက်စာကိုဟိုတယ်၏စားသောက်ခန်းမတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ နံနက်ပိုင်း လော့စ်အိန်ဂျယ်လီမြို့City Tour ကိုလည်ပတ်ပြီး၊ လာစ်ဗေးဂတ်သို့ထွက်ခွါပါမည်။ လမ်းတွင် Premium Outlet Mallတွင် ဈေးဝယ်ရန်ပို့ရပ်နားပေးမှာဖြစ်သောကြောင့် ပျော်ပျော်ပါးပါးဈေးဝယ်ထွက်နိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက်လာစ်ဗေးဂတ်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွါကာတည်းခိုမည့်ဟိုတယ်သို့ ဝင်ရောက် Check In လုပ်ကာ ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။ Hotel : Riviera Hotel or Similar
Day 11 : လောစ်ဗေးဂတ် - ဂရမ်းကန်ယွန်( နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ)
နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက် Las Vegas မှနေ့ချင်းပြန်ခရီးအဖြစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်(၇)ခုအနက်တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သော Grand Canyon သို့သွား ရောက်ပြီး၊( Legacy Silver Package With Lunch )လည်ပတ်ပါမည်။ အံ့မခန်းဖွယ်ရာရှု့ခင်းများကိုတွေ့ရပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ အပန်းဖြေလည်ပတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ညနေတွင် Las Vegas သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာပြီး၊ တဆက်တည်း Las Vegas ၏ Night Tour ကိုလည်ပတ်ချင်ပါကမိမိအစီအစဉ်ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။ Las Vegas တွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Riviera Hotel or Similar
Day 12 : လာစ်ဗေးဂတ် – Fresno ( ကယ်လီဖိုးနီးယား ) ( နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ)
နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက် Las Vegas မှ ၃၉၆ မိုင်အကွာအဝေးတွင်တည်ရှိပြီး၊ ကားမောင်းချိန် ၆ နာရီခန့်ကြာမြင့်သော Fresno သို့ဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ Fresno တွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Fresno or Similar
Day 13 : Fresno ( ကယ်လီဖိုးနီးယား ) – ဆန်ဖရန်စစ်စကို( နံနက် /နေ့လည်စာ / ညနေစာ)
နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက် Fresno မှဆန်ဖရန်စစ်စကိုသို့ဆက်လက်ထွက်ခွါလည်ပတ်ပါမည်။ လည်ပတ်မည့်နေရာများမှာ San Francisco တနေ့တာလည်ပတ်မှု့ကိုစတင်ပါမည်။ လည်ပတ်မည့်နေရာများမှာ - Golden Gate Bridge, Golden Gate Park, Fisherman’s Wharf, China Town, Union Square နှင့်တောင်ကုန်း ပေါ်တွင်ရှိသောတရုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းများသာမကသင်္ဘောဖြင် San Francisco ဆိပ်ကမ်းတလျှေက် Golden Gate တံတားအောက်မှဖြတ်၍နာမည်ကျော်ကြားပြီး လှပသော Alcatraz Island Prison သို့တစ်နာရီလည်ပတ်ကြည့်ရှု့ပါမည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက်တနေ့တာလည်ပတ်မှု့ကိုအဆုံးသတ်ကာ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ ဟိုတယ်သို့ပြန်ပို့ပေးပါမည်။ San Francisco တွင်ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Double Tree by Hilton SFO Airport or Similar.
Day 14 : ဆန်ဖရန်စစ်စကို – Departure Day ( နံနက်စာ )
နံနက်စာကိုသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်တွေ့ဆုံပြီး ဟိုတယ်တွင်ထွက်ခွာခွင့်လုပ်ပေး ပြီးနောက်လေဆိပ်သို့လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
( တစ်ဦးချင်းစီ၏ ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းများ )
ကြာမည့်ရက် ၁ဝ ဦး
Triple Reduction ( PP)
14D/ 13 N
ခရီးစဉ်တွင်ဖေါ်ပြထားသောနံနက်စာ၊ နေ့လည်စာ၊ ညစာများ
EnglishစကားပြောTour Director and professional tour guide for historic site
Domestic Flight Fare for WDC – MCO Airport, Miami – Los Angeles , CA
ဈေးနှုန်းတွင် မပါဝင်သည့် အရာများ
Beverages(အချိုရည် /ယမကာများ) ။Laundry ( အဝတ်လျှော်ခများ )
တယ်လီဖုန်း ၊ အီးမေးလ် ၊ ဖက်စ်အသုံးပြုမှုများ ။ လေယာဉ်အပိုဝန်ဆောင်ခများ /
Please Note : International Flight Information ( Depend on booking time ) for High season ( Classic airline )
Yangon – Singapore – New York / San Francisco by Singapore Air line ( W ) class : 2100 USD
Dragon Air line is budget airline, which doesn’t fly daily.
Thai Airway ( TG ), can’t fly New York, just only LA
China Airline will sleep one in Taipei depend on flight schedule
Child 11 years old or under with 1 or2paying adults :
Child share 1 adult is 90% of adult price, share with2adults is 85% of adult price with bed and 75% of adult price without bed
Tour Director Service Information
1st Tour Director start services at NYC airport on day 1 till day4ends service at WAS airport
2nd Tour Director start services at MIA airport on day4till day7ends service at MCO airport
3rd Tour Director start services at LAX airport on day7till day 12 ends service at SFO airport
၁၂ ရက်/ ၁၁ ည ( Private Tour ) ခရီးစဉ်
12D/ 11 N
Noted : 12 days program tour cost are not included Holly Wood, Universal Studio & Disney Land